Xadhkaha dhaqidda laser denim
Sawir-dhaqashada Denim Laser
Jeans / Funaanad / Dhar / Jaakad / Corduroy
Maxay sameyn kartaa xardho xardha laser-ka
Denim Xardho Shakhsi gaar ah / Whisker / Daanyeer dhaqid / Ween / jeexjeexay / diyaar-u-xidhashada 3D hal abuur leh
Cusbooneysiinta tikniyoolajiyada ee warshadaha dharka lagu dhaqo ee denim , tani waxay noqotay teknolojiyadda guud ee Yurub.
Nidaamka wax lagu nadiifiyo ee Denim waa qaab farsameysan oo dijitaal ah. Kaliya ma ogaan karto burushka gacanta, dhogorta, maydhashada daanyeerka, oo lagu jeexjeexay habka wax soo saarka dhaqameed, laakiin sidoo kale waxay u adeegsan kartaa leysarka xarriiqda, ubaxyada, wejiyada, xarfaha iyo tirooyinka, oo muujinaya saameyn hal abuur leh Kaliya ma ogaan karto howsha dufcadda ee hawsha dhaqidda, laakiin sidoo kale waxay la kulmi kartaa isbeddelka suuqa ee qaabeynta dufcadda yaryar ee gaarka loo leeyahay.
Dhaqida Laser Denim
Burush Gacmeed Dhaqameed
Hal mashiin ayaa badalay shan shaqaale. Mashiinka ayaa si otomaatig ah oo hufan u shaqeeya.
Nidaamyo kala duwan oo isku dhafan, sida whisker, 3D whisker, daanyeer dhaqid, wejigiisa, dildillaacsan, iyo naqshado kasta oo hal abuur leh, kaliya leysar si fudud loo helo.
Si dhakhso leh uga jawaab horumarinta wax soo saarka cusub, iyo isbeddelka ayaa lagu xakameynayaa waqtiga dhabta ah.
Shaqada gacanta ee caadiga ah, tayada way adagtahay in la xakameeyo. Laydhka xardha alaabta laser-ka ayaa leh saameyn aad u sarreeya, tayo sax ah oo deggan.
Qiimaha hawlgalka oo hooseeya
Tiknoolajiyada yurubiyanka, xasiloon oo lagu kalsoonaan karo, kharashka dayactirka ugu yar, kaliya waxay ubaahantahay 7 kWh saacadiiba.
LASERKA DAHABKA - Nidaamka xardho laser-ka ayaa ah doorashada ugu fiican ee lagu kordhinayo faa'iidada alaabada dharka lagu sameeyo ee denim ah.
Kaydinta tamarta iyo bey'adda u fiican
Hawlaha dhaqameedku waxay cunaan qadar fara badan oo kiimiko ah, dhaqid badan ayaa sababa qashin biyo ah, wasakhda wasakhda ahna waa mid deegaanka waxyeello u leh. Maydhashada laser-ka ayaa dhameystirta saameynta kala duwan ee jiiniska habka ugu fudud, hagaajinta deegaanka shaqada, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka.
Maydhashada laser-ka ayaa isku daraysa qaar ka mid ah farsamooyinka dhaqameed si loo abuuro denim heer sare ah oo heer sare ah.
Nidaamka xardho laser-ka ma aha oo kaliya inuu horseedo warshadaha wax soo saarka denim, laakiin sidoo kale wuxuu ku fiicanyahay codsiyada sida maqaarka, jaakadaha, funaanadaha, iyo dharka korduroy, wuxuuna leeyahay adeegsi balaaran qalabka kala duwan ee dharka iyo dharka. 2D / 3D saameyn xardho hal abuur leh waxay sare u qaadeysaa booska qiimaha ballaaran ee badeecada.
Nidaamka xardha Laser
NIDAAMKA XARUNTA LASARKAAN OO NIDAAM AH LOOGU HORMARIYAY JIHNIMADA IYO DHARMARKA DIMIIMKA KU XIRAN.
Qaab No.: ZJ (3D) -9090LD / ZJ (3D) -125125LD
Nidaamka dharka lagu dhaqo iyo nidaamka xardho ee Denim, mabda 'ahaan shaqadiisu waa in loo isticmaalo kombiyuutarka qaabeynta, qaabeynta, iyo sameynta faylasha PLT ama BMP, ka dibna isticmaal mashiinka xardho CO2 si aad uga dhigto laydh heer kul sare leh dusha sare ee dharka dharka sida ku cad tilmaamaha kombiyuutarka . Dunta lagu xidho kuleylka heerkulka sare waa la jarjaray, dheehu waa uumi baxayaa, waxaana si qoto dheer u qoto dheer loo sameeyay si loo soo saaro qaab ama saameyn kale oo dhaqitaan. Qaababkan sidoo kale waxaa lagu qurxin karaa daabac, dhejisyo, kaawil, iyo qalab bir si kor loogu qaado saameynta farshaxanka.
Inbadan oo kusaabsan badeecadan
Software xirfadeed, fududahay in la shaqeeyo, fududahay in loo rogo sawirada wakhti kasta.